Nderupi Rudzi Rwehembe Randinofanira Kupfeka Kana Ndakaoma Mitezo? | KarmanHealthcare.com
Kana iwe wakambotambura a musana kuipa, iwe haudi kuti ndikuudze nezve mangani mararamiro mararamiro auchazofanira kuita. Maitiro ezuva nezuva aimbove akareruka mabasa angangoda kudzokororwa, uye zvingangoita kuti iwe uchazoda kugadzirisa zvimwe kumba kwako, kuti zvive nyore kuita zvinhu zvaunoda. Chinhu chimwe, zvisinei, icho vanhu vazhinji vaisatombofunga nezvayo senge iri nyaya kunze kwekunge vaoma mutezo, ndizvo zvipfeko zvaunopfeka. Muchokwadi, kunetseka kukuru, kwezvikonzero zvinoverengeka.
Basa pamusoro peFomu
Kana wakaoma mutezo, chinonyanya kunetseka pamusoro pembatya dzaunopfeka kunenge kuri kushanda kwadzo. Muchiitiko ichi, izvo zvinoreva kureruka kwaunogona kupinda nekubuda mune izvo zvipfeko. Izvo hazvisi nyore nguva dzose, uye hadzisi dzese hembe dzako dzawaimbofarira dzichanyatsoenderana nebhiri mune izvi. Saka zvakanakisa kutsvaga zvipfeko zvakagadzirirwa kunyanya kune vanhu vane matambudziko ekufamba.
Zvingakushamise iwe kuziva kuti kune chairo chikamu chehembe chekupfeka chakanyatsogadzirirwa vanhu vakaremara? Inonzi "zvipfeko zvinogadziriswa". Haasi ese zvipfeko zvinogadziriswa zvinoitirwa vanhu vakaremara mitezo. Kune mamwe mamiriro ezvinhu anoitawo kuti zvive zvakaoma kuzvipfekedza, kusanganisira arthritis uye yakabata yemhasuru uye yekutya system system. Asi zvese zvine chinangwa chakajairika: kuita kuti zvive nyore kushandura mbatya dzako, kunyangwe pahutano hwako.
Mbatya dzinochinja-chinja dzevanhu vakaoma mitezo dzinogona kusanganisira zvinhu zvakadai seVelcro fasteners kana kubvarura panzvimbo yemabhatani, nekumhanyisa uye kureruka pakuvhura, bhurugwa rine maburi emumativi, uye mamwe magadzirirwo anotendera munhu kupfeka akagara pachigaro.
Nyaradzo: Kwete kungova zveumbozha zvekare
Sezvo isu tichisimbisa basa, unogona kufunga kuti nyaradzo ihombe yekunetseka. Asi kana uchinge uchipedza nguva yakawanda uri muwiricheya kana pamubhedha, haudi kugara wakapfeka zvipfeko zvinoita kuti unyanye kusagadzikana, uye zvinogona kuburitsa kupokana kunogona kukonzera maronda. Mbatya dzakagadzirwa kubva mumucheka wakatambanuka hadzina mukana wekuunganidza. Homwe dzekumashure, dzinowanikwa mumabhurugwa mazhinji, hadziite basa kana uri muwiricheya, uye dzinogona kukonzera kusagadzikana mushure memaawa akati wandei, saka tsvaga mabhurugwa asina iwo.
Fashoni haina kubva pamubvunzo!
Sezvatakambotaura, mashandiro uye nyaradzo ndizvo zvakakosha zvakakosha zvekutarisa. Asi izvi hazvireve kuti haugone kupfeka hembe dzefashoni, nekuti wakaremara. Iwe haufanire kutora izwi rangu pane izvi.
Ndokumbirawo zadza fomu pazasi kuti ugamuchire ruzivo maererano nekubvunza kwako. Unogona kutipa runhare ku 1-800-80-KARMA, kana ndapota tsungirira patinenge tichipindura kubvunza kwako.